Ejipta: Tsia, Tsy Mbola Vita ny Revolisiona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2012 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Dansk, Français, Español, Ελληνικά, বাংলা, فارسی, Svenska, English
Isan'ny lahatsoratra manokana fandrakofantsika ny Fifidianana 2011/2012 any Ejipta ity.
Nitodika tany amin'i Ejipta indray ny mason'izao tontolo izao tamin'ny 23 sy 24 May, noho ity firenena ity nanao ny fifidianana filoham-pirenena voalohany taorian'ny firohotam-bahoaka izay nampiongana an'i Hosni Mubarak herintaona sy tapany lasa izay.
Kandidà manodidina ny 660 no niezaka ny hahazo fankatoavana (izay nahatonga ny mpitoraka bilaogy Bassem Sabry hitondra ity lisitra mahatsikaiky ahitana ireo tsy nihazakazaka hilatsaka ho filoha ity). Tsy ny Firahalahiana Silamo sy ny Antokon-dry zareo Fahalalahana sy Rariny (Freedom and Justice Party (FJP)) ihany no hita tao amin'ireo kandida fa hita tao ihany koa ny mpikambana matanjaka teo amin'ny fitondrana teo aloha (fantatra amin'ny anarana hoe “felool” na “fatritran'olona”).
23 sisa no kandida ofisialy, ary ny folo tamin'izy ireo no tsy tafiditra an-daharana ofisialy. Arak'izany, kandida 13 ny fitambarany tavela ny 23 May, milahatra manomboka amin'ny “kandidan'ny revolisiona” Khaled Ali avy eo Mohamed Morsi,”kodiarana fiandry” ho an'ny FJP.
Ny fifdianana filoham-pirenena Egyptiana raha fintinina. Sarimiaina nataon'i Carlos Latuff.
Tokony ho ny 29 May no havoaka amin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana farany, nefa nisy fahalinana nahery vaika nony nikatona ny birao fandatsaham-bato. Nanomboka avy hatrany ny fanisana taorian'izay ary dia nivoaka ara-potoana koa ny valiny teo amin'ireo fantsom-pahitalavitra sy tamin'ny famoahana mivantana taminà bilaogy maro.
Ny fitaterana sy ny fanisana
Toy ny tamin'ny fifidianana parlemantera, dia nahazo laka ihany koa ireo ny fanarahamason'ny mponina ireo tsy fetezana maro. Saika feno tatitra teo amin'ireo karazana tambajotra sosialy. Saika nambara ho fiampangana ny mpanohana ny kandida FJP Mohamed Morsi sy ny praiministra teo aloha Ahmed Shafik ny ankamaroan'ny fitarainana toy fampielezan-kevitra tsy ara-dalàna.
Goavana koa ny fahalinana tao amin'ny Twitter, teo ambanin'ny tenifototra #EgyPresElection, #EgyElections, #EgyPresElex, ka nahatonga ny olona niresaka sahady sy samy nanazava ny antony nadia mbola ny 2% fotsiny tamin'ny vokatra aza no voaisa.
Nitarika ho amina sangisangy mikasika ireo ora niadaladalàna sy tsy nahitan-tory izy ity :
@bassem_sabry: Vao izao mihitsy: nandresy tamin'ny vato 99.9% i Hosni Mubarak.
@vicosalama: @bassem_sabry aahh ny andro taloha. tsy misy ahiahy 🙂
Nametraka antontan-taratasy niarahana nanao ny mpampiasa Twitter @Iyad El-Baghdadi sy i @GalalAmrG mba hanarahana ny fandehan'ny vokatra. Nanampy nanamarina ny valiny farany ny tenako tamin'ny fanangonana ireo isa navoakan'ny vaovao Ahram Online sy Aswat Masriya.
Rehefa nivoaka ny valiny, dia naseho hoe i Mohamed Morsi sy Ahmed Shafik no kandida mety hanao fihodinana manaraka amin'ny 16 sy 17 Jona. Tsy nampoizina anefa, fa nanao dingana lehibe ilay Nasserista Hamdeen Sabahi:
@HaniShukrallah:MAIKA MAIKA : nandingana ho amin'ny toerana faharoa i Sabbahi!
Tsy sangisangy! Fifidianana malalaka any Egypta??? sarimiaina nataon'i Carlos Latuff.
Isan'ny tena fahagagana goavana tamin'ity fifidianana ity ny habetsahan'ny isan'ny vato azony, indrindra fa tany Alexandria (toerana famaharan'ny Firahalahiana Silamo) sy ny distrikan'i Imbaba any Avaratr'i Le Caire (najakan'ny Salafi hatramin'izay) tena nifidy matanjaka an'i Sabahi. Avy eo taty aoriana izy lasa laharana fahatelo, ary nijanona teo araka ny fanisàna farany.
Na izany aza, maro no nibodo ilay fifidianana satria tsapan'izy ireo fa tsy demokratika izy ity ary mety hanamafy fotsiny izao ny fifehezan'ny miaramila ny firenena.
Nohamafisin'ny fanambarana voalaza ho nataon'ny mpitondratenin'i Ahmed Shafik izany tahotry ny maro izany, izay nilaza hoe “efa vita ny revolisiona”.
Tsy mbola vita ny revolisiona
Nitosaka tao amin'ny Twitter ny fanehoan-kevitra raha nivoaka ny alin'ny 25 May ny fanisàna farany:
@MohAbdElHamid: Raha nisy zavatra iray voaporofon'ny androany dia mety hoe tsy misy dikany ny faminaniantsika. Fa tsy hay fantarina ity revolisiona ity.
@DaliaEzzat_: Terena hisafidy aminà endrika fasisma roa ny Egyptiana. Ho an'ny maro, tsy fanapahan-kevitra mora izy ity. Fiantraikany tena goavana ho an'izy roa.
@Gsquare86: Ny fandrindràna no vahaolana!! raha nisy lesona azo notsoahina tamin'i Ikhwan [Firahalahiana Silamo] dia hoe na tsy malaza mihitsy aza izy ireo, mihodina ihany ny milin-dry zareo!
@shadihamid: Mifantoka loatra amin'ny fitahirizana ny ‘tanzim’, na fandrindràna ny Firahalahiana. Raha amin'izay indray, dia afaka mikiaka fandresena sahady izy.
Maro tamin'ny fifanakalozan-dresaka no nifantoka tamin'ny fibodoana ny fihodinana faharoa:
@glcarlstrom: Ny fahitako azy aloha amin'ity fifidianana ity dia tahaka ny ho zavatra hanana ny toerany goavana ny fandraisana anjara amin'ny #fihodinana faharoa any #Egypta – alaivo sary an-tsaina hoe mihamitombo ny isan'ireo mpifidy tsy mavitrika?
@RawahBadrawi: Raha misy koa ny fotoana tokony hanaovana fibodoana, dia amin'izao. Tsy fara-tampon'ny tsy fahaiza-manavaka ny mifidy an'i Morsi ho toy ny làlana hanatanterahana ny tanjon'ny Revolisiona.
Fihodinana faharoa amin'ny fifidianana any Ejipta – misy safidy ve? Sarimiaina nataon'i Carlos Latuff.
Ary na dia efa nanapa-kevitra sahady aza ny sasany ny hibodo ilay fifidianana ho “tsy manana etika sy manala baraka”, ny sasany mino fa hadisoana goavana izy ity satria dia ho toy vato mandeha mangingina mankany amin'i Morsi izany.
Fanampin'izany, nipetraka ihany koa ny fanontaniana amin'ny hoe firy tamin'ny vato azon'i Sahfik no avy amin'ny mpifidy Kristianina Coptic vitsy an'isa. Na dia tsy dia tena hoe nanohana ity kandida ity tamin'ny fomba ofisialy aza ny fiangonana Coptic, maro amin'ireo Copts no manahy ny amin'ny mety hahalasa ho filoha ny mpikambana ao amin'ny Firahalahiana Silamo. Maro ny olona no mino fa nanosika an'i Shafik ho ambony ny vaton'ny Kristianina, hevitra nailika ho toy ny “diso” ary notoherina tany anaty fanamarihana [ar] maro.
Niposaka ny hevitra mikasika ny mety hisian'ny fiarahana raha hita fa toa mitsipaka ny fiverenan'i Morsi i Aboul Fotouh, mpikambana teo aloha tao amin'ny Firahalahiana Silamo ary eo amin'ny toerana fahefatra. Maro ireo niantso ny hampiharana ny lalàna momba ny zo ara-politika izay vao nolaniana farany teo ( ny lalàna “manohitra ny felool” ) ary koa ny hanakanana an'i Shafik tsy hahazo hilatsaka:
@Amany90: Tokony hitambatra daholo izao ireo mpahay lalàna Ejiptiana rehetra mba hamoahana an'i Shafiq ary hampiasa ny lalàna fanokanana na ny fiampangana noho ny kolikoly. Ataovy ny asa
@mfatta7: Azo iadian-kevitra araka ny lalàna ny fisian'i Shafiq ao anatin'ny lisitry ny kandida ary dia azon'ny fitsaràna mahefa tsoahana eo mihitsy izy alohan'ny fihodinana faharoa.
@mfatta7: Any amin'ny SCAF [miaramila] ny fanalahidin'ny fitsarana ny Lalàm-panorenana izay mitazona ny fanalahidin'ny fankanana an'i Shafiq tsy ho ao anaty hazahazaka.
Amin'izao fotoana izao, maro no mievaeva eo anelanelan'ny fahatairana sy ny ahiahy, mandinika ireo tranga ratsy maro , nefa koa ny hafa miantso ny firenena handroso amin'ny anaran'ireo izay rehetra nahafoy ny ainy ho an'ny revolisiona. Ary tsia, na dia eo aza ny mety ho vokatr'ity fifidianana ity, tsy mbola vita ny revolisiona: ny isan-jato dia maneho fa ny 75% n'ny Egyptiana no nifidy nanohitra ny filohan'ny Firahalahiana Silamo ary 60% nanohitra ny fiverenana amin'ny fitondrana teo aloha.
20 Avrily 2016Eoropa Andrefana